Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Kominikeeshinii Gullisoo/Facebook
Godina Wallagga Lixaatti Kantiibaan Magaalaa Gullisoo Obbo Abbabaa Takkaaliny hidhattootaan mana isaanii keessatti ajjeefaman.
Owwaalchii kantiibaa ji'oota muraasa darbanif magaalitti bulchaa turan guyyaa kaleessaa raawwateera.
Obbo Abbabaan Dilbata galgala mana isaanii keessatti akka ajjeefaman Itti - gaafatamaan Waajjira Bulchinsaafi Nageenya Aanaa Gullisoo Obbo Tasfaa Likkaasaa BBC'tti himaniiru.
''Adda isaaniirra rasaasa lamaan bitaafi mirgarra balbala isaanii irratti dhahani," jedhan.
"Kan inni du'e achumatti. Ergasiimmoo mana lixanii laapitoppiifi barreeffama maqaa gaggeessitootaa qabuufi walgahiif qopheesse fuudhanii bahan,'' jechun himan.
MNO qaama seeraan ala hidhatee socho'u 'ni dhabamsiisna' jedhe
Ajjeechaan kuni erga raawwate as 'namni to'atame hin jiru' kan jedhan Obbo Tasfaan qorannoon itti fufuu himu.
Ajjeechaa irra deddeebbiin gama Lixa Oromiyaatti raawwatun sodaa keessa seenuun hojjettonni mootummaa, daldaltonniifi qonnaan bultoonni gara giddugaleessa Oromiyaa akka baqataa jiran dhihoo BBC'tti himaniiru.
MM Abiy: 'Shaffatanii hidhame jechuun fudhatama hinqabu'
''Ajjeechaa booda hojjettonni baay'ee rifatanii jiru. Ajjeechaan kuni nurras hin gaha sodaa jedhu qabu. Sababa kanaaf hojjettonni magaalaa kaleessa hojii hin seenne,'' jedhan.
Image copyright Kominikeshini Gullisoo/Facebook
Goodayyaa suuraa Magaalaa Gullisoo bara 2017
Erga magaalaa bulchuu eegalanii naannoo ji'a jaha hin caalani kan jedhan Obbo Tasfaan isa dura itti gaafatamaa BLTO Aanaa Gullisoo turan jedhan.
Kunis ta'u waraana kana dura ABO jala sosso'aa ture ajjeechaa kanaaf akka shakkan qondaalli nageenyaa kun BBC'tti himaniiru.
''Isaanuma jennee kan nutti shakkinu,'' jechuun kan himan Obbo Tasfaan ''Adda Bilisummaarraa kan adda bahanii kan ofii isaanii socho'aa jiran daggala keessa baay'eedha,'' jedhan.
Abbaa ijoollee lamaa kan ta'an Obbo Abbabeen Dilbata galgala mana keessa televijinii ilaalaa laapitoppii isaanii irratti barreessaa akka turan himu qondaalli dubbisne.
Galgala ''sa'aatii 4 ta'uuf 10 hir'uutti manaa isa waamani. Jalqaba mucaan isaa waggaa 10 hin guunne manaa baanaan, isa ol deebisani abbaa waamnaan gadi bahe rasaasa lamaan rukutani,'' jedhan Obbo Tasfaan.
Kana dura qondaalli nageenyaafi kan dhaaba ODP Godina Qeellam Wallaggaa ajjeefamaniiru. Ji'oota muraasa dura immoo kantiibaan magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan rukutamanii lubbuun hafaniiru.
Rakkoo nageenyaa gama Lixa Oromiyaa jiru hiikuuf mootummaan waraana kan bobbaase yoo ta'u turtii keessa garuu ajjeechaan itti fufeera.